Sing Swim Sway.....: တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲ စစ်အစိုးရကတော့ အိတ်ဖောင်း
REF : MSMA
မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် ပြင်ပကမ္ဘာမှ သက်ရောက်လာသည့် ဖိအားများကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ဆက်လက်၍ယိုယွင်းကျဆင်းနေလိမ့်မည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များက ခန့်မှန်း တွက် ချက်နေ ကြသည်။ သို့သော် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ဘဏ်စာရင်းများကတော့ ဆက်လက်၍ ကြွယ်ဝနေကြဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီနှုန်း မြင့်တက်လာမှု၊ စီးပွားရေးအရ လွဲမှားသော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ယမန်နှစ်က ဆန္ဒပြပွဲများကို စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းနှိမ်နင်းပြီးနောက် ဖြစ်လာသည့် ရိုက်ခတ်သက်ရောက်မှုများ စသဖြင့် စုပေါင်းသက်ရောက်လာသည့် အကျိုးဆက်များကြောင့် တောက်လျှောက် ဆိုးရွားစွာ ဖိနှိပ်ခံနေရသော မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ယခုနှစ်တွင် ပိုမို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိနေပါသည်။
“အစိုးရရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေနှင့် ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စအားလုံး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာနိုင်ဖွယ် အကြောင်း မမြင်ရဘူး၊ အမှန်က ပိုဆိုးလာဖို့ပဲ ရှိနေတယ်”ဟု မြန်မာစီးပွားရေး စောင့်ကြည့်အကဲ ဖြတ်မှု (Burma Economic Watch) အစီရင်ခံစာကို ရေးသားထုတ်ဝေသူ သြစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ မက်ကွိုင်းယား တက္ကသိုလ် (Macquarie University) မှ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ရှောင် တာနယ် (Sean Turnell) က ပြောပါသည်။
“နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည် နည်းပါးခြင်း၊ အခွန်ဝင်ငွေ ကျဆင်းနေခြင်း၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆိုင်းငံ့နေကြခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေပေါ်လွယ်မှုနှင့် ကြွေးမြီပြဿနာ စတဲ့ အချက်အလက် အားလုံးက စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ နှစ်တနှစ်ကို ဦးတည်နေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတယ်၊ အန္တရာယ် အနံ့အသက်တွေ ရောပြွမ်းပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြောင်းကိုတော့ ထားလိုက်တော့၊ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ဖို့တောင် မလိုလှဘူး” ဟု ရှောင် တာနယ်က ဆိုပါသည်။
“မနှစ်တုန်းက စစ်အစိုးရက သွေးရူးသွေးတမ်း စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင် ဒီနှစ် အတွက်ကော ဘာဖြစ်လို့ ထပ်လုပ်ဖို့ မလိုရမှာလဲ”ဟု သူက စောဒကတက် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သေးသည်။
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) နှင့် စီးပွားရေး အကဲဖြတ် စုံစမ်းရေးဌာန (Economist Intelligence Unit) နှစ်ဖွဲ့ မှ ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အလားအလာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု အစီရင်ခံစာများတွင်လည်း အလားတူ စိတ်ပျက်ဖွယ် ခန့်မှန်းချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
IMF က ခန့်မှန်းဖော်ပြခဲ့ရာတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်ကုန် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် အနည်းဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်လည်း လျော့ကျသွားနိုင်သည့် အခြေအနေ မရှိဘဲ ပို၍ပင် ဆိုးသွားနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် လာမည့်လများတွင် ကုန်ကျစရိတ် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လောင်စာသုံးစွဲမှုကို ပိုမို၍ ချွေတာ ကန့်သတ် သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟုလည်း ရှောင် တာနယ်က ခန့်မှန်းထားသည်။
“နောက်တကြိမ် ဆီဈေးနှုန်း ထပ်မြှင့်ဖို့ဆိုတာ (စစ်အစိုးရအတွက်) ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင် အခြေအနေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် လောင်စာဆီ ပေးတဲ့ ခွဲတမ်းကို လျှော့ချရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား၊ အဲဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အသုံးစရိတ်ကို ပမာဏအရ အလားတူပဲ ချွေတာနိုင်ပါတယ်”ဟု သူက ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းသို့ ပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကပင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး အခြေအနေ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်းကို အထင်းသား ဖေါ်ပြနေသည်။ ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလန် (၃. ၇၈၅ လီတာ) ကို အစိုးရ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းနေ ကြပြီး မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ၄ ဒေါ်လာခန့် ပေးနေရသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုသည် တနေ့လျှင် ၁ ဒေါ်လာ အောက်တွင်သာ ၀င်ငွေရှိကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်ပသို့ ရောင်းချရန် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့အများအပြား ပေါကြွယ်ဝသော်လည်း နိုင်ငံ၏ လောင်စာဆီ လိုအပ်ချက် အတွက် ပြည်ပမှသွင်းကုန်ကိုသာ လုံးဝ မှီခိုအားထားနေကြရပါသည်။
သို့သော်လည်း လွဲချက်တခုမှာ ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကပင် ဗိုလ်ချုပ်များကို ကြွယ်ဝစွာ ရပ်တည်နေနိုင်ရန် ကူညီ ထောက်ပံ့နေပြန်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့ ဓာတ်ငွေ့ဝယ်ယူသော တိုင်းပြည်များက စစ်အစိုးရ အိပ်တွင်းသို့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၂ ထောင်ခန့် ထည့်ပေးနေသည်ဟု IMF က ဆိုပါသည်။
အနောက်နိုင်ငံများမှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ပိုမိုတင်းကျပ်လာသည့်အချိန်၊ တခြား အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားခရီးသည် ကျဆင်းလာပြီး နိုင်ငံခြား ထောက်ပံ့မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ အားနည်းချိနဲ့လာသည့်တိုင် စစ်အစိုးရက ဤဓာတ်ငွေ့ရောင်းချရာမှရသည့် ၀င်ငွေများကြောင့် ဆက်လက်ရပ်တည်၍ ခေါင်းမာမာ နေနိုင်သေးသည်။
“စစ်အစိုးရသည် တိုင်းပြည်၏ ဒုက္ခဆင်းရဲ ပြဿနာများအတွက် မည်သို့မျှ တာဝန်မယူလိုခြင်းမှာသိသာလှသည်။ ပြစ်ဒဏ် ခတ်ပိတ်ဆို့သော နိုင်ငံများကို ယိုးစွပ်ပြီး တပါးသူကိုသာ အပြစ်ပုံချနေသည်”ဟု စင်ကာပူ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး တက္ကသိုလ် (Singapore Institute of International Affairs – SIIA) ၏ အစီရင်ခံစာ တခုတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
“ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှ ၂၅ နှစ်စာ အတိုးလွတ်ချေးငွေ ရရှိဦးမည် ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် စီးပွားရေးအရ အသက်ရှုပေါက် ရနိုင်ဖွယ် ရှိနေသေးသည်”ဟု SIIA က အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ ချေးငွေ ပမာဏနှင့် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိရသေးသော်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု SIIA က ခန့်မှန်းထားသည်။
ယင်းချေးငွေသည် ယမန်နှစ်က မြန်မာ စစ်အစိုးရအရာရှိများ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မှု ခရီးစဉ်တခု နောက်ပိုင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆောာ်ဒီများအတွက် ဈေးချိုသော မြန်မာအလုပ်သမားများ ပို့ပေးမည်ဟူသည့် ကမ်း လှမ်းချက်ဖြင့်လည်း ဤချေးငွေရရှိမှု ဆက်နွယ်မှု ရှိကောင်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း စစ်အစိုးရ၏ အိပ်ကပ်ထဲသို့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယကဲ့သို့သော အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှ ငွေများဝင်ရောက် လာရန် ရှိနေပါသေးသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းပိတ်ပြည်နယ်များဖြစ်သော အရှေ့မြောက်ပြည်နယ်များအနေနှင့် ပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်း ကြောင်း တခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် စစ်တွေနှင့် ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက်ဆိပ်ကမ်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေး အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရမှ ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ အကုန်ကျခံမည့်စီမံကိန်းအား ခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့် နယူးဒေလီက ဗိုလ်ချုပ် များ အိပ်ထဲသို့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ထည့်ပေးပါလိမ့်ဦးမည်။
မြန်မာပြည်ကို ဖြတ်၍ စစ်တွေကမ်းရိုးတန်းမှ စွမ်းအင်ကို အာသာငမ်းငမ်း လိုအပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ဓာတ်ငွေ့နှင့် လောင်စာဆီများ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးမည့် ပိုက်လိုင်းများတည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက ကြိုတင် ငွေ ထုတ်ပေးလိမ့်ဦးမည် ဖြစ်သည်။
“ဒီလို လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရေတိုကာလ သက်ရောက်မှု ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်၊ လက်တဆုပ်စာ လူတစု အတွက် တော့ အကျိုးဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကကျတဲ့ စီးပွားရေး၊ ဒါနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ လူမှုရေး ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်တော့ လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခု၏ သံရုံးမှ အရှေ့ တောင်အာရှ စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတဦးက ပြောပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေတိုအလားအလာများက မှုန်ဝါးထိုင်းမှိုင်းနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ မူဝါဒများသည် “လူအများ၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ် နေစေသည်”ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မကြာသေးမီက ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အစိုးရဟာ အပြုသဘော တိုးတက်လုပ်ဆောင်မှု အားလုံးကို ငြင်းဆန်လျှက်ရှိနေတယ်၊ သူ့ ပြည်သူ တွေက တောင်းဆိုတာရော၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက ပြောတာရော ဘယ်လိုမှ အပြုသဘော တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်တာ မရှိဘူး”ဟု မကြာသေးမီက အရှေ့အာရှခရီးစဉ်အတွင်း အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စကော့ မာစီရယ် (Scot Marciel) က ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့က လူ့အခွင့်အရေးတို့ ဒီမိုကရေစီအရေးတို့ကိုသာ အများဆုံး ပြောလေ့ပြောထရှိပါတယ်၊ ဒါတွေက ကျနော် တို့အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေပါ၊ ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စက အဲဒီ အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်သွားပါပြီ၊ စီးပွားရေးက အောက်ဆုံးကို ထိုးကျနေတယ်၊ ပညာရေးစနစ်ကလည်း တစစ ပျက်စီးယိုယွင်းလာနေတယ်၊ တတိုင်းပြည် လုံးမှာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာပါ” ဟု သူက ဆက်၍ ပြောခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်မှုနှင့် ထိုင်းမှိုင်းကျဆင်းနေသည့် စီးပွားရေးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြား ပြည်ပတွင် အလုပ် အကိုင်ရှာဖွေစေရန် တွန်းအားသဖွယ် ဖြစ်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့ပေးမှု ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာဖွယ် ဖြစ်နေရသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကလေးငယ်အားလုံး၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ အလယ်တန်းကျောင်းများတွင် စာသင်ကြား နိုင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်အစိုးရက ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာငွေထဲမှ ၀. ၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ လူထုကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုသည် အခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံစားခွင့် မရှိကြပေ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံကြီး ၂ နိုင်ငံဖြစ်သော အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗိုလ်ချုပ်များအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များလုပ်ဆောင်ရန် သိမ်းသွင်းဖြောင့်ဖြလိုသော ဆန္ဒမရှိကြဘဲ၊ လျင်လျင်မြန်မြန် ကြီးထွားနေသော ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်အတွက်သာ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးပြုလိုကြသည် ဟု အကဲခတ်လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝမှု နှင့် မဟာဗျူဟာအရ အချက်အချာကျမှု (တည်နေရာ) အပေါ် ထိုသို့ တိုးတက်နေသော စီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးများက စိတ်မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက်အောင် အာသာငမ်းငမ်းတက် လိုချင်နေကြ ခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု ဟာဝိုင်အီ အခြေစိုက် အမေရိကန် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပစိဖိတ်ဌာနချုပ်က မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန် သည့် အစီရင်ခံစာတစောင်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အလားတူပင် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ)သည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လမ်းညွှန်မူများကို အတုယူကာ ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်လိုပါသည်ဟု ပြောဆိုနေခဲ့သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အတွက်ကိုမူ ကြံစည်အားထုတ်မှု လုံးဝ မရှိပေ။
စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်သော မူဝါဒများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေသော်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ အစီအစဉ် အသစ်ဖြစ်သော “အာဆီယံတခွင် ချောမွေ့စွာ ခရီးသွားလည်ပတ်ရေး အစီအစဉ်” (Visit Asean Pass) တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းကို ထည့်သွင်းထားပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်သစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “ဒေသ အတွင်း နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်း အဆင်ပြေချောမွေ့ရေး၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် တနေရာမှ တနေရာသို့ သက်သောင့်သက်သာ ဖြတ်သန်း သွားလာနိုင်ရေး"ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲများကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုများအပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဆင်မပြေ ဖြစ်နေချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်သည်လည်း လွဲချော်နေပြန်တော့သည်။ သို့သော်ငြားလည်း ထိုနည်းလမ်းသည်သာလျှင် အာဆီယံအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံအား ၎င်းတို့၏ “အားလုံးပါဝင်ရေး” မူဝါဒအောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသံကို ပါဝင်ခွင့်ပေးနိုင်သော နည်းလမ်း တခုလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Labels: စီးပွား၊ကုန်သွယ်, နိုင်ငံရေး